Talooyin ku Saabsan Isticmaalka Taleefannada Dadweynaha iyo Taleefannada-News-Yuyao Xianglong Communication Industrial Co., Ltd.
Talooyin ku Saabsan Isticmaalka Taleefoonnada Dadweynaha iyo Taleefoonnada Bixinta
Waqtiga: 2020-06-09 Hits: 10
Masaafada dheer iyo qiimayaasha maxalliga ah ee laga soo qaado telefoons iyo taleefannada kale ee ku yaal meelaha dadweynaha sida hoteellada, isbitaalada, iyo garoomada diyaaradaha way kala duwanaan karaan, oo si la yaab leh ayey u badan yihiin. Kahor intaadan isticmaalin taleefanka dadweynaha ama taleefoonka lacagta lagu diro, ogow waxa laga filan karo.
1.Bees telefoon caqli leh: ogow xuquuqahaaga
FCC, oo ay weheliso dawladaha, ayaa ilaaliya macaamiisha isticmaalaya taleefannada dadweynaha iyo taleefoonnada gacanta oo leh qawaaniin wax looga qabanayo:
Wicitaannada degdegga ah: Bixiyeyaasha adeegga wadayaasha waa inay si dhakhso leh ugu xiraan 911 wicitaan bilaash ah.
TRS: Wicitaanada maxalliga ah ee Adeegyada Relay ee Isgaarsiinta - adeegyada u saamaxaya wicitaannada ka imanaya dadka dhagoolka ah, kuwa dhegaha culus, ama kuwa naafada ka ah hadalka - waa lacag la'aan taleefannada taleefannada.
Wacitaanka agagaarka: Waxaad wicitaanada ka dhigi kartaa taleefoonka lacagta lagu diro ama taleefanka kale ee dadweynaha adoo u maraya shirkada masaafada dheer ee aad dooratay adoo isticmaalaya nambar marin si aad u “garaacdo” taleefoonka bixiyaha ama bixiyaha adeegga dadweynaha. U soo wicitaanka agagaaraha waxay la micno tahay inaad garaacdo lambarka 800, lambar maxalliga ah oo ka bilaabmaya 950, ama lambar toddobo lambar ah oo loo yaqaan 101-XXXX ama 10 10 XXX lambar. Sharciga federaalku wuxuu mamnuucayaa in shirkadahaas masaafada dheer laga xayiro taleefannada dadweynaha.
Ma xiriirin: Bixiyeyaasha adeegga wadayaasha kama ogaan karaan inay ku soo dallacaan lacag wicitaannada aan jawaabtooda la jawaabin.
Qiimaha maxalliga: Dowlado badan ayaa sii wada nidaaminta sicirka loogu yeero wicitaanada maxalliga ah. Ka hubso guddiga korontada bulshada ee gobolkaaga ama shirkadda taleefanka maxalliga ah qiimayaasha.
Macluumaadka bixiyaha adeegga: Bixiyeyaasha taleefannada dadweynaha waa inay ku dhajistaan ​​meel muuqata ama meel u dhow taleefan kasta magaca, cinwaanka iyo lambarka lacag la'aanta ah ee adeegbixiyaha.
Wicitaano bilaash ah Wicitaanada lambarrada lacag-la'aanta ah, oo ay ku jiraan wicitaannada loogu soo diro kaararka wicitaanka ama kaararka deynta, uma baahna lacag qadaadiic ah. Waxaad la xiriiri kartaa hawl wadeen adigoon dhigin lacag shilin ah.
Dhageyso ka dib marka aad garaacdo lambarka aad soo wiciayso si aad u ogaato cidda adeegbixiyaha ka hadlaysa wicitaankaaga. Adeegbixiyaha waa inuu ku gartaa asaga bilowga wicitaanka kahor inta uusan wicitaanku xirmin oo biil bixin. Kadib waxaa laguu sheegi doonaa sida loo barto wadarta qiimaha wicitaanka taleefanka - oo ay kujirto wax dulsaar ah - adoo riixaya wax aan ka badnayn 2 nambar, ama adoo khadka kujira.
Ilaa aad u isticmaashid qadaadiicda si aad u bixiso wicitaanka, bixiyaha adeegga wicitaanka wuxuu kaaga baahan doonaa inaad ku dallacdo wicitaanka kaarka wicitaanka ama kaarka deynta, wac aruurinta ama u dallacidda wicitaanka dhinac saddexaad.
Warshadaha Isgaarsiinta ee XiangLong wuxuu bixiyaa tayo balaaran oo kala duwan, biyo-xireyn, dadweyne aan kala go 'lahayn oo iska caabin ah telefoonka gacantas iyo furayaashas. Dhamaan telefoonada gacanta waxaa laga sameeyay walxo PC / ABS waara. Furayaasha oo dhami waxay ka kooban yihiin Bir daxal laheyn or zinc alloy. Badhanka dusha, qaabka iyo qaabka ayaa loo habeyn karaa iyadoo loo eegayo shuruudaha macaamiisha.
Hore: 4x4 Keypad bir ah oo lagu rakibay Mashiinka Tiffany & Co. ee London
Xiga: Furaha birta dhagaxa ah ee lagu rakibay Kiosk iswiidhishka ah